Photo of Friday the 13th – မျှော်လင့်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Photo of Friday the 13th – မျှော်လင့်ခြင်း
Photo of Friday the 13th – မျှော်လင့်ခြင်း
Posted by မြစပဲရိုး on Jan 13, 2012 in Photography | 14 comments
သူ့မျက်နှာ က စကား အများကြီးပြောနေတယ်။
တကယ်မှ လွတ်လာပါ့မလား ဆိုတဲ့ ယုံရနိုးနိုး အငွေ့အသက်နဲ့ စိုးရိမ်စိတ် တွေ အများကြီးဘဲ။
သူ့ စောင့်နေခဲ့ တဲ့လူ ပါ ခဲ့ရဲ့လား လို့ ကျွန်မ သိချင်နေမိတော့တာပါဘဲ။
အိမ်မှာ လဲ အိမ်ရောက်ရင် စားရအောင် စားဖွယ်လေး တွေ စီစဉ် ထားခဲ့လေသလား။
စောင့်ရကြိုးနပ်ပြီး ပြုံး ပျော်ရွှင်စွာ အိမ်ပြန်ခရီး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားစွာသောအကြည့်များ နဲ့ 
အသက်ဝင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံ ပါပေ။
“ကိုလေ” or “ကိုပေ” ;-) ရဲ့ မှတ်ချက် ကြည့်ပြီး ထပ်ဖြည့်ဖို့ အတွေးထပ်ပေါက်လာလို့။
အဲဒီ အမျိုးသမီးကြီး မျက်နှာ ဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်သူလူထု တွေ ရဲ့ ယုံရနိုးနိုး အခု ခံစား နေရ တာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
စာနာတတ် သော စိတ်ရှိခဲ့ရင်ဖြင့် သက်ဆိုင်သူ လူကြီးမင်းများ လဲ ဝင်ခံစား ကြည့်ပါ။
ပြီးတော့ ထွက်ပေါက်တံခါးကို စေတနာအပြည့် နဲ့ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့။
မှန်လိုက်လေ အရီးရယ် အဲ့ဒါ ကျမတို့ တမျိုးသားလုံးရဲ့ ခံစားချက်ကို ကိုယ်စားပြုထားတာ
အဲ့ဒီပုံက စကားတွေ အများကြီးပြောနေတာ…
အမူအယာမြင်ပြီး စိတ်ခံစားမှုကို ဖတ်တတ်တဲ့ မလတ်ရေ-
ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံက ပေးသွားတဲ့ရသတွေက ပြောမထွက်လောက်အောင်ကို များပြားလှပါတယ်။
photography မှာ candid ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားရှိရဲ့ဗျာ …
သူ့အထှာက အရိုက်ခံတဲ့သူ မုဒ် မပျက်ဘဲ (၀ါ) ရိုက်လို့ အိုက်တင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ …
ပင်ကိုယ် အစစ်အမှန် ခံစားပြုမူဆောင်ရွက်ချက် ပေါ်လွင်တဲ့ပုံမျိုးကိုခေါ်တာပါဗျ….
သည် case မှာက ဂုဏ်သတ္တိအလွန်ပြောင်မြောက်တဲ့အချက်က …
အနှီအဒေါ်ကြီးသည် ကင်မလာနှင့်ချိန်တာ …ရိုက်တာ ကို မရိပ်မိ မရှိ ..မသိမရှိ …
သိမှာ ရိပ်မိမှာပါပဲ … (စလုံးပေါင်းသည်းခံပါ)
သို့သော် …သိလျက်နဲ့ကို ….
အိန်ဒရေ မဆည်နိုင်… ဂရုမပြုနိုင် …. ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် …
သူ့ မနော မှာ ကိန်းတဲ့ ဇောစိတ်က ပြင်းပြလွန်းသကိုးဗျာ ……။
သိလျက်နဲ့ …လို့ပြောရတာ အကြောင်းရှိပါတယ်ဗျာ ….
၂။ ဒါ့ပုံရိုက်ခံတဲ့အခါ ….
ပေါ်လာ… ပြလာတဲ့ အပြုအမူက ….အလွန်သိသာတယ်ဗျ ….
(ကျနော် စကားလုံးချို့တဲ့လို့ ရှင်းမပြတတ်…)
သို့သော်သေချာတာတခုကတော့ အနှီ ဆိုက်ကို ကေ့စ့်တွေကို override လုပ်ပြီး….
ရိုက်မယ်သိလျက် အရိုက်ခံခဲ့ပြီး ..သဘာဝအတိုင်းကို ….ပင်ကိုယ်ခံစားချက်ပေါ်လွင်လွန်းတဲ့ ….
classical candid ဖြစ်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ…
ခံစားချက်တွေ ..အယူအဆ အတွေးအမြင်တွေကတော့ အပေါ်မှာ ဆြာ/ဆြာမတွေ ပြောပြီးဖြစ်လို့
Tele .. Tele … တယ်လီ .. တယ်လီ .. Street Photographer ဆိုတဲ့ လိုင်း ကို စိတ်ဝင်စားသော်ညှား လဲ .. သံယောဇဉ် တွယ်စရာ အပုံအပင် ရှိသောကြောင့် … တစ်ရက်လောက်တော့ Candid album တစ်ခု တင်ဦးမယ်ဗျာ။ ခု က .. 85မမ ပဲဆိုတော့ . နဲနဲ တော့ ခက်တယ် ဗျ … Tele ဆိုတော့ IS မပါ ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နဲနဲ မှောင် နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လွယ်ဘူး ရယ် .. :-(
ဂီဂီရေ ပြောချင်ရင် မနော နာမည်မပြောရဘူးလေ မနော ဘာမှကိန်းဘူးလေနော်…
အမှန်ပြောရရင်တော့ ပထမတစ်ခေါက်လွှတ်တုန်းကတော့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အဘွားက သူ့သားပြန်လာမယ်ဆိုပြီး သား ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ချက်ထားရှာပါတယ်။ မိုးချုပ်မှ မလာလောက်တော့ဘူးဆိုပြီး တစ်ယောက် ၀မ်းနည်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ ခုထိမထွက်သေးပါဘူး။ ခုတစ်ခေါက်တော့ မနက်ထဲက သတင်းရတယ်။ ရထားနဲ့ ပြန်လာပြီ မနက်ဖြန်မှရောက်မယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့ ရောက်တာပေါ့နော်… ခုမှပဲ ပြုံးပျော်နိုင်တော့တယ်။
အမှန်ပင် ပြန်လာမှ အေးရမယ့်
ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ လွတ်မှလွတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မသေမချာမျှော်လင့်နေရတဲ့ စိတ်က မျက်နှာမှာ ပေါ်နေတာနော်…………..
အရင်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အိုးဘိုထောင်က ၀န်ထမ်းသမီးဆိုတော့ ထောင်ထဲကို အလည်ခေါ်တာနဲ့ လိုက်သွားဘူးတယ်၊ ထောင်ရှေ့မှာ ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ စောင့်နေတဲ့ အမေကြီးတွေဆို အဲ့လိုမျက်နှာမျိုးတွေနဲ့ပေါ့၊ မျှော်လင့်နေရတဲ့ မျက်နှာပေါ့နော်…………
မထင်မကရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလဲ တန်းတူ..လွတ်ပါစေ..
ပုံထဲက တူမရီးရဲ့ အပုဂ္ဂိုလ်လဲ မျှော်လင့်ထားသလို..လွတ်ပါစေဗျာ..
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး၊အလွန် မှကို ရင်ထဲ ဆို့နင့်စွာခံစားရပါတယ်ဗျာ။ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ရင်း ကျနော့်ကို အားပေး ဖူးတဲ့ အမေ့မျက်နှာ၊လွတ်လာတော့ ၀မ်းသာပြီးမျက်ရေကျလာတဲ့ အမေ့မျက်နှာကိုပါပြန်
မြန်ယောင်ပြီး အရမ်းခံစားရပါတယ်ဗျာ။မိခင်တိုင်း၊ အဆွေခင်ပွန်းတိုင်း ၀မ်းသာပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ။
ခုလိုဘဲမျှော်နေကြသူ အမေအပေါင်းနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါတယ်ဗျာ။